काममै नगई १५ वर्षदेखि तलब खाइरहेका अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ Bizshala -
'ब्याजदर'मा राष्ट्रबैंकको हस्तक्षेप, अघिल्लो महिनाभन्दा १०% का दरले मात्र परिवर्तन गर्न पाइने
लगानीकर्तालाई आउन थाल्यो मार्जिन कल, बढ्यो तनावको पारो
ग्लोबल आइएमईमा रेमिटान्स बचत खाता खोल्दा ब्यालेन्ससहितको एनसेल सीम सित्तैमा
सनराइज, सानिमा र प्राइमले सहकर्मी बैंकको ४० अर्ब निक्षेप खोसे(टेबलसहित)
काममै नगई १५ वर्षदेखि तलब खाइरहेका अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ
काठमाण्डौ । इटलीको एउटा अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले पूरा तलब प्राप्त गर्ने गरी लगाइएको काम १५ वर्षदेखि नगरेको आरोप लगाइएको त्यहाँको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
दक्षिणी सहर क्याटानजारोस्थित चाच्चो अस्पतालमा कार्यरत ती कर्मचारी सन् २००५ बाटै काममा आउन छाडेको आरोप लगाइएको छ। उनीमाथि ठगी, जबरजस्ती पैसा असुलेको अनि कार्यालयको दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको समाचार संस्था एन्साले उल्लेख गरेको छ।
काम गरिरहेको ठानिएका उनलाई त्यस अवधिमा कुल ५ लाख ३८ हजार युरो (पौने ८ करोड रुपैयाँ) तलब दिइएको बताइएको छ।
अस्पतालमा छ जना प्रबन्धकहरूमाथि पनि सो मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। इटलीका सार्वजनिक निकायहरूमा हुने ठगी र अनुपस्थितिको आशङ्कामा प्रहरीले गरेको लामो अनुसन्धानपछि उनी पक्राउ परेका हुन्।
पक्राउ परेका व्यक्ति सरकारी जागिरे हुन् र उनलाई सन् २००५ मा अस्पतालमा सरुवा गरिएको थियो। उनले त्यसपछि काम छल्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले आफूविरुद्ध अनुशासनको कारबाही नगर्न तत्कालीन प्रबन्धकलाई धम्की दिएको समेत प्रहरीले आरोप लगाएको छ।
ती प्रबन्धकले अवकाश लिएपछि उनको अनुपस्थिति त्यसपछिका प्रबन्धकहरू र मानव संसाधन निकायले थाहै नपाएको प्रहरी भनाइ छ। – बीबीसीबाट
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल गठन, शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने समय ७ दिनमा झार्ने प्रस्ताव
असोजमा पनि बैंक कर्जा बिस्तारमा आक्रामक, निक्षेपको अवस्था के छ ?
सेबोन र नेप्सेमा नेतृत्व नहुँदा समस्या नै समस्या
लगातार पहिरो जान थालेपछि ठूला लगानीकर्ता पनि अत्तालिए, ब्याजदरले चौतर्फी हलचल
बचत र मुद्दतिमा एनआइसी एशियाले ल्यायो बैंकिङ क्षेत्रकै पृथक प्रडक्ट, २४ सुविधाले भरिपूर्ण
बजारमा भीषण पहिरो, नेप्से २४०० को लाइनमा
यी ७ कुरामा ध्यान दिए तपाईको आर्थिक अवस्थामा कहिल्यै आँच
काठमाण्डौ । सारा विश्वलाई नै आफ्नो कब्जामा लिएको कोरोना महामारीबाट...
पहिलो घर किन्न लोन लिनुहुँदैछ ? काम लाग्न सक्छन् यी टिप्स
काठमाण्डौ । घर खरिद गर्नु एउटा सपना पूरा हुनु हो भन्दा फरक पर्दैन ।...
मानिसको कद घट्न थालेपछि यो देशलाई भयो चिन्ता, कस्तो पर्ला
काठमाण्डौ । दशकौँदेखि नेदरल्यान्ड्सको दाबी रहँदै आएको छ कि उसको...